May Pyramid, Piramidin'ny volana Mey - Buenos Aires
Adiresy: Plaza de Mayo, C1064AAA CABA, Arzantina
Ireo mpanoratra ny tetikasa: Pedro Vicente Canete, Joseph Dyuburdie
Daty fototra: 25 May 1811.
Trano fanorenana: obelisk
Haavo: 18,76 m
Buenos Aires dia tanàn-dehibe fahiny ary misy tantara mahaliana sy firindrana tokotokony. Ny foiben'izy io dia ny May Square, voaravaka amin'ny tsangambato nasionaly - ny May Pyramid.
History of the Pyramid May
Tamin'ny May 1811, nankalaza ny tsingerintaona voalohany tamin'ny Revolisiona Mey i Arzantina. Ho fanomezam-boninahitra an'ity hetsika manan-danja ity, nanapa-kevitra ny hanangana tsangambato iray izay hanamarina ny fahalalahan'i Arzantina ireo mpikambana ao amin'ny Antenimiera voalohany. Ny mpanoratra ilay tetikasa dia Pedro Vicente Canete.
Efa 200 taona mahery izao, ny May Pyramid dia efa atahorana handrava mihoatra ny indray mandeha. Te-hanangana tsangambato miavaka kokoa izy ireo, saingy ny mpahay tantara sy ny mpanao gazety dia samy afaka niaro io obelisk io.
Toe-karena sy endriky ny Architect Pyramid May
Na dia teo aza ny fanokafana ny obelisk tamin'ny volana Mey 1811, dia mbola nitohy nandritra ny taona maro ny famolavolana azy. Tamin'ny voalohany, ny rafitra dia natao tamin'ny endrika piramida tsotra. 30 taona monja taorian'io dia nanova ny haben'ny May pyramide ny mpanao sary sokitra Prilidiano Puerredon, izay nanitatra ny toerany. Nandritra izany fotoana izany, nandrafitra sarivongana manana diplaoma 3.6 metatra ny lehibe sculptor Joseph Dyuburdieu, izay nanasongadina ny tsangambato. Mampiseho vehivavy iray ao amin'ny cap de Phrygienne izay maneho ny fahombiazan'ny fahafahan'i Arzantina. Ilay mpanao sary sokitra iray ihany no namorona sarivongana efatra, izay manamarika hoe:
Tamin'ny voalohany, ireo tsangambato ireo dia napetraka teo amin'ny zoro efatra teo am-pototry ny May Pyramid. Nifindra tany amin'ny faritra antitra tany San Francisco izy ireo tamin'ny 1972. Ankehitriny izy ireo dia hita any amin'ny araben'i Defensa sy i Alsina any amin'ny 150 metatra miala ny toerana misy ny obelisk.
Ny piramida maoderina amin'ny volana Mey dia rafitra iray monja, voarakotry ny marbra fotsy. Any amin'ny ilany atsinanana, izay mijery ny Casa Rosada (tranon'ny filoham-pirenena) , dia aseho ny masoandro volamena. Amin'ny lafiny telo hafa dia nanampy trotraka tamin'ny endrika lamosin'ny lamosina.
Ny dikan'ny Pyramid Mey
Io tsangambato ara-tantara io dia nanana lanjany ara-politika sy ara-kolontsaina manan-danja ho an'ny mponina ao amin'ny firenena. Any akaikin'ny Pyramid Mey, ny hetsika ara-tsosialy, hetsi-panoherana ara-politika ary hetsika hafa ho an'ny daholobe dia mihazona tsy tapaka. Eo amin'ny diany dia misy sarin'ireo vehivavy fotsy hoditra. Izy ireo dia manindrahindra ny reny izay efa nanjavona nandritra ny didy jadona miaramila.
Ao amin'ny tanànan'i La Punta ao Arzantina, Campana, Bethlehem ary San Jose de Mayo (Orogoay), misy piramida marina amin'ny piramida May. Saika ny filoham-pirenena faharoa ao Arzantina , miditra amin'ny fahefany, dia mikasa ny hamindra na handrava tanteraka an'io obelisk io. Araka ny voalazan'ny mpanao politika sy ny mpahay tantara dia tsy azo tanterahina ireto antony ireto:
Ny tsangambato no ivon'ny Buenos Aires sy ny fiandohan'ny fanombohan'ny fanorenana ny renivohitra;
olona maro no mampifandray ny piramida May amin'ny fandresena voalohany, ka mahatonga azy ho karazana alitaran'ny fahalalahana;
Fahatsiarovana tsotra sy laconic dia mampahatsiahy antsika fa ireo tena tia tanindrazana eto amin'ity firenena ity, na dia mahantra aza izy ireo, dia navela malalaka;
Tsy misy lalàna tokana ahafahana mamotika ity tsangambato nasionaly ity.
Ahoana no hahatongavana amin'ny Pyramidan'ny volana Mey?
Buenos Aires dia tanàna maoderina misy foto-drafitrasa efa misy, ka tsy misy olana amin'ny fisafidianana ny fitaterana . Ny Pyramidan'ny May dia hita ao amin'ny Plaza de Mayo, 170 metatra avy eo ny toeram-ponenana ofisialin'ny filoham-pirenena - Casa Casa Rosada. Ity ampahan'ny renivohitra ity dia azo aleha metro na bus. Tokotokony 200 metatra monja avy amin'ny tsangambatom-piainana dia migadra metro telo monja - Catedral, Peru sy Bolivar. Azonao atao ny manatratra azy ireo amin'ny sampana A, D sy E. Ireo mpizaha tany izay te-handeha amin'ny fiara dia tokony hitondra ny lalana Nos. 24, 64 na 129.
Ahoana no atao hoe arbidol amin'ny olon-dehibe?
Ahoana ny fomba fanabeazana ankizy?
Inona no azo atao amin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny vehivavy bevohoka?
Mila visa ho an'i Torkia ve aho?
Tubkal National Park
28 tattoos saka tokana
Ahoana no mahatonga ny lehilahy tia ny Virgo?
Ny tarehiny dia mitebiteby - ny antony
Fanolorana ny tendron'ny orona
Boots tsy misy fehiloha
Kitapo elektrika misy fiantraikan'ny lelafo 3d
Niseho tamin'ny fety niaraka tamin'ireo mpiara-miasa i Megan Markl nandritra ny taom-piarahamonina "Force Majeure"
Eggshell - tsara sy ratsy